August 13, 2016 – Waxaa marlabaad uu qalalaase uu ka dhax abuurmay Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland kadib markii Somaliland ay saxiixday Heshiis ay la gashay Shirkad maamulidoonta Dekedda Magaalada Berbera.
Shirkadan Somaliland ay heshiiska la saxiixatay ayaa ka soo jeeda dalka Imaaraadka Carabta, waxaana Golaha wakiilada Somaliland ay dhawaan ansixiyeen heshiis ay wada galeen xukuumada Somaliland iyo Shirkada Dubai Port World oo lagu maalgalinayo dekedda magaalada Berbera.
Hadaba, dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay heshiiskaasi ka hadashay, kuna tilmaantay mid sharci darro ah oo aaney danugu jirinShacabka Soomaaliyeed.
Hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya, Nuur Faarax ayaa waraysi uu siiyaya BBC-da ku sharaxay meesha ay wax ka qaldanyihiin.
Dhinaca kale, Somaliland ayaa waxkama jiraan ku tilmaantay hadalka ka sooyeeray Hanti-dhowraha dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
Wasiirka qorsheynta Somaliland Cali Xuseen Ismaaciil ayaa isagana dhankiisa Laanta warbaahinta ee VOA- u sheegay in Somaliland ay ka madax banaan tahay Soomaaliya, isla markaana ay heshiis walba la gali karto ciddii ay doonto.
DHAGAYSO Hadalkii Dowladda Federaalka
DHAGAYSO Hadalkii Somaliland
August 13, 2016 tuugahaladilo2015
Somaliland oo Maanta Sheegtay Inay Xiriirka u Jartay Dalka Qadar (VIDEO) June 10, 2017
Somaliland oo Sheegtay in Dowlada Imaaraatka Carabta ay Weeraro ka Qaadi karto Saldhiga Berbera (VIDEO) May 27, 2017